Nisahotaka… : nilaharana ny fividianana takom-bava | NewsMada
Nisahotaka… : nilaharana ny fividianana takom-bava
Nilaharana ny fividianana fitaovana fanakonam-bava teny amin’ny farmasia, omaly tontolo andro. Vitsy ny toeram-pivarotana fanafody eto an-dRenivohitra mbola nanana tahiry namidy ka noferana ho dimy isaky ny olona iray no azo omena. 500 Ar ka hatramin’ny 700 Ar ny vidin’ny takona iray arakaraka ny farmasia ividianana azy. Ny olona sasany, mividy hatramin’ny boaty telo na efatra ahitana takona 100 isanisany ho fitsinjovana ny any aoriana.
Nanazava ny tomponandraikitra ao amin’ny minisiteran’ny Fahasalamana fa rehefa mifampikasoka amin’ny olona ahina ho voan’ny aretina pesta vao tokony hampiasaina ny takom-bava. Mila dorana ny fitaovana alohan’ny hiditra ao an-trano tsy hitondrana ny tsimokaretina amin’ny fianakaviana.
Manentana ny sekretera jeneralin’ny minisiteran’ny Fahasalamana fa tsy ilaina ny fitondrana takom-bava ary tsy tokony hisavoritaka hilahatra hividy izany ny vahoakan’Antananarivo.
Voizin’ny “facebook” rahateo fa betsaka ny maty sy marary fa afenin’ny minisitera ny isa marina ka nampisavoritaka ny mponina nividy fiarovana. Saika misarom-bava avokoa ny olona mifamezivezy tazana eny an-dalambe, mitondra fiara na mandeha an-tongotra. Hanana fahefa-mividy hanolo ny sarom-bava isan’andro ve ny isan-tokantrano? An’ny tsirairay ny safidy.